Izivini namaLakeviews - Private Hillside Suite
Osoyoos, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Dan & Anne
Ukubuka okumangalisayo, izivini ezikhazimulayo, nezinye zezindawo zewayini ezihamba phambili eCanada eduze kakhulu.
Indawo yethu itholakala ebhentshini elisempumalanga ye-Osoyoos, lizungezwe izivini endaweni ehamba phambili e-BC. I-Osoyoos Lake Beach Park, izinkundla zegalofu, izitolo kanye nezindawo zokudlela ezinhle kusenemizuzu nje embalwa.
Uzoyithanda i-suite ngenxa yokuthi iyimfihlo, ikhanya futhi ivulekile. Ngempahla yesimanje emisha kanye nekhishi elihlome ngokuphelele, kuyindawo enhle yokuphumula. Indawo yethu ilungele izithandani noma abahloli bewayini ababodwa/abababili.
Indawo yokungena esezingeni eliphansi, ukukhanya okuningi kwemvelo, amafasitela amakhulu nokubukwa okubanzi okuya e-Osoyoos Lake. Ikhishi eligcwele likuvumela ukuthi wenze ukudla, uma uthanda. Igumbi lokuhlala elibanzi linikeza indawo yokuphumula. Indawo yethu ephansi yotshani iyindawo ongahlala kuyo elangeni noma emthunzini.
5.0(75 okushiwo abanye)
5.0 · 75 okushiwo abanye
Impela imizuzu embalwa nje usuke unayo:
- Ukufinyelela Okukhulu kuma-Wineries amaningi
- Osoyoos Lake Beach & Park
- Izindawo zokudlela
- Idolobha lase-Osoyoos
- Hamba ngebhayisikili
Ibungazwe ngu-Dan & Anne
We love Airbnb and have had great accommodations from Texas to Moscow, Malta to Singapore and Japan to Vietnam! Come visit this great wine region in British Columbia.
Sihlala phezulu endlini enkulu futhi sihlela ukwenza ukuhlala kwakho kuphumule ngangokunokwenzeka. Sinesipiliyoni seminyaka eyishumi ye-winery ngakho-ke singathanda ukukwazisa kwamanye amawayini ahamba phambili e-BC.
U-Dan ungumshayeli ochwepheshile we-Driven Wine Tours futhi unguchwepheshe Oqinisekisiwe Wewayini. Sibuze mayelana nokubhukha ukuvakasha kwewayini okuyimfihlo okungokwezifiso njengokugqamisa ukuhlala kwakho.
Sihlala phezulu endlini enkulu futhi sihlela ukwenza ukuhlala kwakho kuphumule ngangokunokwenzeka. Sinesipiliyoni seminyaka eyishumi ye-winery ngakho-ke singathanda ukukwazisa kwam…
UDan & Anne Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Français, 日本語, Español